Abaarta ka jirta Puntland oo sababtay in xooluhu ay dhintaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAbaarta ka jirta Puntland oo sababtay in xooluhu ay dhintaan
November 13, 2016 Mohammed Omer Ahmed Mulla Puntland, Somalia 0
Neef geel ah oo u dhintay abaarta ka jirta gobolada Puntland. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Gobolada Puntland ayaa wajahaya abaartii ugu xumayd muddo 15-sanno guddahood ah, sida ay sheegeen xoolo dhaqatada.
Xoolo dhaqatada ayaa sheegaya in caws iyo biyo la’aanta ay sababtay in xooluhu ay dhintaan.
“Xooluhu waa ay dhimanayaan sidoo kale dadkuna khatar buu ku jiraa maxaa yeelay waxay noo ahaayeen maal aan quudano,” Cusmaan Siciid oo ah xoolo dhaqato ku sugan dooxada Ayax ee gobolka Nugaal ayaa sidaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
“Xoolo ma iibsan karno, suuq ma ay leh, mana aanu dheefsan karno waayo aad bay u macaluuleen, xaalad adag baanu ku jirnaa,” ayuu ku daray Cusmaan.
Puntland iyo dhammaan dalka oo dhan, haddii xoolaha nool la waayo waxay ka dhigantahay in la waayay dakhli.
Bilowgii bishaan, gudaha gobolka Karkaar, ugu yaraan labo qof ayaa ugu dhimatay haraad iyo gaajo, sida ay sheegeen dadka ka shaqeeya howlaha iinsaanimada.
Gobolada Nugaal, Bari, Mudug, Sool iyo Karkaar ayaa ugu daran meelaha ay abaarta jirta saamaysay.